Fitsidihana trano - masinina plastika Zhejiang Tonva CO., LTD
Izahay foana no nametraka ny fikarohana ny teknolojia sy ny fampandrosoana. Manana efitrano fikarohana sy fampandrosoana tsy miankina izahay, ary miaraka amina ekipa R & D matihanina, ao anatin'izany ireo injeniera mandroritra fandrosoana, injenieran'ny famolavolana bobongolo, teknisiana famolavolana lozisialy, sns.
Atrikasa famolavolana sy fanodinana
TONVA dia miaraka amina rafitra fikirakira mandroso sy milina tsara. Mino tanteraka izahay fa ny kalitao sy ny hafainganana dia singa fototra handresena ny fifaninanana, milina mandroso, tsy vitan'ny hoe manatsara ny kalitao hatrany, fa mampihena ny fihodinan'ny famokarana ary mahatonga ny mpanjifa hifaninana kokoa eo amin'ny tsena.
Momba ny debugging
Fanaraha-maso kalitao 100% alohan'ny fandefasana.
Hamafa ny masinina araka ny takian'ny mpividy momba ny vokatra amin'ny dingana debugging .Raha vao manamafy ny santionany ny mpividy dia hiditra amin'ny dingana fanaterana. Ny injenieranay dia afaka mandeha any ampitan-dranomasina hanao debug-ging, ny mpividy dia afaka mandefa injeniera any amin'ny ozininay koa hianatra ny fandidiana.